I-Sage ivela eNingizimu Yurophu naseMediterranean Asia amazwe. Kukhona izinhlobo eziyinkulungwane ezihlukene nezinhlobo zezitshalo zeSalvia noma izitshalo ezihlakaniphile. Ngenhloso yokukhiqiza ezentengiselwano, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ezikhiqizwa noma ezivuniwe futhi zivame ukuhlanganiswa ngokuzithandela noma ngengozi ngenxa yokufana kwazo.
Igama lesayensi: Salvia officinalis
Igama elivamile: Sage Common noma uDalmatian Sage
Ukuba yinto ethandwa kakhulu yizici ezinomsoco kunazo zonke namafutha, lapho isitshalo sitshalwe khona.
Igama lesayensi: Salvia Triloba
Igama elivamile: Sage Mediterranean noma Wild Sage.
Utshalwe ikakhulukazi eYurophu futhi ukhula lapho.
Isitshalo se-Sage sinama-hard and singakhula sibe ngu-700 mm ukuphakama. Lesi sitshalo yisihlahla esihlala njalo esihlahleni esinamahlumela aluhlaza okwesibhakabhaka esine-sheen esivumayo kubo. Zenza izimbali eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezibomvu noma ezimhlophe
I-Sage kokubili ifomu layo elisha futhi elomile lisetshenziselwa izitsha eziningi zokudla njenge-flavouring. Okunye okusetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile. Amaqabunga anamafutha aphezulu kakhulu futhi ombili ama-sage omisiwe futhi amafutha asetshenziselwa kakhulu embonini yezinyosi esetshenzisiwe njenge-flavouring kanye nokulondolozwa.
Kubhekwa njenge-antioxidant futhi isetshenziselwa umshini we-perfume njenge-repellent yezinambuzane. I-Sage inezinhlobonhlobo zamakhono ezempilo nokukhusela okubhekwa njengezibonakaliso zokubandayo nomkhuhlane, isibonelo, umkhuhlane nomkhuhlane. Ithimba le-Sage kuthiwa lisho izinhlungu ezivela emkhunjini.
I-Sage ihamba kahle emhlabathini owodwa ovutha kahle futhi ikhula ngobuningi obubanzi be-pH phakathi kuka-5 no-8 kodwa ingcono kakhulu enhlabathini ene-pH ephakathi kuka-6.5 no-7. Ngaphambi kokulungiswa komhlabathi kwenziwa isampula yomhlabathi emele kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhodini lokuhlola nokunconywa kwezakhi.
Umhlabathi kufanele ukhahlelwe ukukhulula iphrofayli yomhlabathi cishe 600 mm ukuqinisekisa ukugeleza okuhle. I-lime yokuthi kungenzeka ukuthi i-pH ivuselele futhi umquba noma umquba kufanele usetshenziswe futhi uhlonywe emhlabathini ophezulu ka-400 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala zengeza izakhi ezilandelwayo ezidingekayo kanye nomanyolo olinganiselwe wokutshala emhlabathini kanye ne-disc noma i-rotavator enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm. Lokhu kuhlanza noma yikuphi ukhula olungase lubekwe. Uma ukugoqa nokuxubana kwenziwa ngalezi zinyathelo kanti lezi zitshalo zilungele ukutshala.
I-Sage isitshalo esiqinile, esihlala njalo sihlumela esikhula ezindaweni ezifudumele futhi senza kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-20°C no-30°C. Ibuye ibekezelele isithwathwa futhi emawubhiseni ahlanzekile iyoba ngaphezu kwebusika kahle. Nokho, ukushisa okweqile kubulala isitshalo ngaphandle kokuthi kuvikelwe.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zeSage ezivuna ukuhweba, i-Common Sage neSage Mediterranean.
Ama-cultivars avame ukutshala ukusetshenziswa kwabantu: Alba, Albiflora, Aurea, Berggarten, Extrakta, Icterina, Lavandulaefolia, Purpurascens, Purpurea kanye ne Tricolor.